သက်ခိုင် – အဲဒါကိုက အမှတ်တရ | MoeMaKa Burmese News & Media
အောင်ဝေး - ရ န် ကု န် ချီကျောင်းသား သ ပိ တ် တ ပ် ကြီးဘွဲ့( အ ပို င်း- ၄ ၊ နိ ဂုံး)
မင်းညွန့်လှိုင် - တော်ရုံရွာပေါ့ မိုးနတ်သား
ဝေဒနာ ... လောဂျစ်
သက်ခိုင် – အဲဒါကိုက အမှတ်တရ
သြဂုတ် ၉၊ ၂၀၁၄
အို…. အို….. အမျိုးသားကောင်းတွေ
အို…. အို….. အလေးပြုပါတယ်လေ
ငါတို့ ဝေမှ ဖြေမှ။
သူရဲကောင်းတွေ ရောနှော ယှက်စပ်
(အော် ၈၈ ကိုသတိတရ)
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ကဗျာ, သက်ခိုင်